MH Industrial - Momba anay - Ningbo MH
Amin'izao fotoana izao, MH dia manana orinasa sivy izay miparitaka amin'ny fototra telo famokarana. Ny orinasa sivy dia: Ny MH Embroidery Thread Factory, ny MH Lace Embroidery Factory, ny MH Band sy ny Rope Factory, ny MH Trimming Factory, ny MH Crochet Lace Factory, ny MH Ribbon Factory, MH Sewing Kit Factory, MH Bias Binding Bape Tape Factory ary MH Polyester Fandaharana Fandraketan-davenona.
MH Factories Tour! Tsindrio Eto
The kofehy embroidery orinasa dia manarona ny metro 20,000 karea ary manana ny kitapo feno fanodikodinana, fanenomana sy fanodinana fitaovana izay mahavita ny kofehy sy ny polyester kofehy embroidery amin'ny endrika sy famokarana.
MH dantelina Ny famokarana fototra dia orinasa lehibe sy matihanina amin'ny famokarana izay manana 83,000 efamira metatra toradroa ary miditra amin'ny fanaovana, famolavolana, famokarana ary fivarotana. Izy io dia manana 27 anton-koditra vita amin'ny embryidery Schiffi sy ny milina 400 avy amin'i Tajima, Behringer ary ireo milina manitra hafa mahasalama. Ny vokatra fototra dia landihazo dantelinadantelina simenitra, kofehy matevina, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, embroidery, kavina vita amin'ny rongony telo,
Ribbon & kasety
Ny foibem-pamokarana MH sy ny famokarana horonantsary dia fitaovana famokarana maoderina manokana amin'ny famokarana andian-jiro. Izy io dia mirakitra metro 45,000 metatra ary manana 100 milina fanangon-jacquard solosaina, 2,000 setroka fitaratra tariby, 100 sets karazam-bary (tsy) shuttle milina sy ny famokarana ny rindran-damba ary ny loko mihidy miaraka amin'ny output 1,000 taonina isan-taona. Ny vokatra fototra dia karazana kofehy vita amin'ny kodiarana isan-karazany, kofehy manga, kofehy rongony, rindran-damba, tady rongony / tady, kofehy matevina, sarona tady, lambam-baravarankely, ravin-damba ary karazan-tady mahazatra sy kasety mahazatra.
MH Industrial Home Sokajy --Threads --Zippers - Ripona & Tape --Ropes --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming - Fanampiana fitaovana - Fitaovana & Accessories - Mamboatra machine & Parts --Fabric --Others Momba anay - MH Overview --MH Industrial --- Ny orinasa mpamokatra --- Zava-bozaka & andian-tavoahangy --- Hazo fijinjana - Nahoana isika no mifidy antsika? --MH Tantara --Trade Shows --Image Galleries --Video Album MH Culture - Sarobidy --MH Dreams - Adidy amin'ny asa sosialy Mifandraisa aminay - Toerana mahomby - Fitoriana toerana --Shop Location --Feedback Community --Avia ho namanay --News